मिडिया – MySansar
यसपालिको चुनावमा पत्रकारले गरेका पाँच ‘रमाइला’ गल्ती
Posted on May 16, 2022 May 16, 2022 by Salokya
चुनाव वैशाख ३० गते सकिसक्यो। तर नाङ्ग्लो जत्रो मत गन्न टाइम लाग्ने भएकोले अझै चुनाव लागिरहेकै अवस्था छ। पाठकलाई चुनाव लागेपछि मिडियालाई पनि लाग्ने भइहाल्यो। जतिसक्दो छिटो, अरुलाई उछिन्ने गरी समाचार राख्नु परिराछ। तर हतपतको काम कहिलेकाहीँ लतपत पनि हुन्छ। पत्रकारले हतार गर्दा कहिलेकाहीँ ‘रमाइलो’ पनि हुने गर्छ। खास त गल्ती हुँदा रमाइलो मान्न नहुने… Continue reading
बजारमा अर्को ‘गठबन्धन’ : १५ वटा मिडियाको ‘एक नेपाल’
Posted on April 25, 2022 April 25, 2022 by Salokya
राजनीतिमा ५ दलीय गठबन्धनको समाचार पढिरहनुभएकै होला। स्थानीय रुपमा ठाउँ ठाउँमा गठबन्धन टुक्रिएर ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’भन्ने नयाँ शब्दलाई पनि खुबै चलाउन थालिएको छ। राजनीतिमा गठबन्धन मौलाइरहेकै बेला आज नेपालका केही प्रमुख मूलधारे मिडियाहरुमा एउटा विज्ञापन देख्नुभयो होला। केही ब्रोडसिट दैनिकहरुमा त ज्याकेट नै लगाइएको छ। १५ वटा मिडियाको गठबन्धन रहेछ यो। तर यसको विज्ञापन ध्यान दिएर… Continue reading
एनसेल मुद्दा : हुँदै नभएको हेगको समाचार अनि लोगो चैँ भारतीय कम्पनीको :)
Posted on March 15, 2022 by Salokya
कहिलेकाहीँ अनलाइनहरुमा बडा रमाइलो समाचारहरु आउँछ। हाँस्न कमेडी शोहरु हेर्न जानै पर्दैन। मोबाइलमै आइपुग्छन् कसैले सेयर गरेका न्युजहरु। खोलेर पढ्यो, नहाँसी बस्न सकिन्न। एउटा त्यस्तै समाचार तपाईँहरुसित बाँड्न मन लाग्यो। तपाईँहरु पनि हाँस्नुस्, ममात्र किन हाँस्ने। एउटा समाचारको लिङ्क सोसल मिडियामा देखेँ। शीर्षक थियो- ‘एनसेल कर छलीको मुद्दा हेगमा : बिचौलियाको दबदबाबीच सरकारले मुद्दा जित्ने… Continue reading
विषय एउटै, व्यक्ति एउटै- भनाई कसरी फरक : विज्ञको काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउने प्रवृत्ति?
Posted on March 9, 2022 March 9, 2022 by Salokya
जसरी हुन्छ मिडियामा छाइरहन चाहनेहरुका कुरा छाड्दिम, अलि सिरियस मान्छेहरुलाई सोध्नुहुन्छ भने उनीहरु नेपालका पत्रकारहरुले आफ्नो भनाई जस्तो हो त्यस्तो नलेखिदिने गुनासो गर्छन्। अर्थात् बोलेको हुन्छ एउटा, छापिँदा अर्को भएर आइदिन्छ। दिने कोट (लुगा भन्या हैन नि फेरि, quote भनेको) एउटा, छापिने कोट अर्को। कोट अर्थात् तपाईँले उद्धरण चिह्नभित्र केही शब्द वा वाक्य हाल्नुहुन्छ भने… Continue reading
चीनले खासमा भनेको के हो ? ‘विरोध’ कि ‘प्रतिरोधको चेतावनी’? नेपाली मिडियामा आ-आफ्नै व्याख्या
Posted on February 19, 2022 by Salokya
अहिले नेपालको ‘हट टपिक’ एमसीसीको विषयमा शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीन वक्तव्यबाजीमा उत्रेका छन्। एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गर्न थालेका छन्। केही दिनअघि मात्रै वाशिङटन डीसीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध चीनले खेलिरहेको ठानेको बताएका थिए। हिजो चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि अमेरिकालाई आक्षेप लगाए। चिनियाँ प्रवक्ताले भनेको विषयमा नेपाली मिडियामा फरक फरक अर्थ दिने… Continue reading
आयल निगमले हैन, मिडियाले बढाएछ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ
Posted on February 18, 2022 by Salokya
के तपाईँले पनि बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको समाचार पढ्नुभएको थियो ? समाचार राख्ने अनलाइन मिडियाहरुको दावी अनुसार बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिलिटर पेट्रोल ५.६१, डिजेल ५.६२ र हवाई इन्धन ४.९५ रुपैयाँले भाउ बढाइएको थियो। नझुक्किनुस्, भाउ बढेको छैन। ती समाचारहरु गलत हुन्। यसबारे नेपाल फ्याक्ट चेकमा तथ्य जाँच… Continue reading
बतासले पठाएको ८ बूँदे ‘नोट’ सारेर ‘कोषका अनुसार’ लेख्दै बाइलाइन समाचार
Posted on February 7, 2022 February 1, 2022 by Salokya
हाम्रा पत्रकारहरुले बाइलाइन समाचार लेख्दा पनि कस्तोसम्म गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण फेला परेको छ। कुरा बतास समूहको हो। सुरुमा मिडियाले एकोहोरो खेदेका थिए बतासलाई। त्यसपछि लो प्रोफाइलमा बस्ने बतास आफै मिडिया-मिडिया धाएर अन्तर्वार्ता दिएर माहौल आफ्नो पक्षमा ल्याए। हाम्रो मिडिया उही हो फेरि, बोल्न खप्पिस बतासलाई मिडियाले राम्रोसँग प्रश्न सोध्न पनि सकेन। बतास त व्यापारी… Continue reading